Maxaad ka taqaan magefayaasha Soomaaliya la degay? | Calanside
Maxaad ka taqaan magefayaasha Soomaaliya la degay?
Published on May 30, 2017 by amiin · No Comments Views
27 sano ayey ku dhowdahay inta Soomaaliya ay ku jirto, dagaallo, colaad aan dhammaan is-qabqabsi aan macno lahayn iyo dowlad awood leh oo dalka oo dhan maamusha oo meesha ka maqan.
Weliga ama is-weydiisay waxa Soomaaliya ka reebaya asaageed? Dhibaatada ugu weyn ee haysta Soomaaliya ma ahan qabiil, sida dad badan aaminsan yihiin, waase daneystayaal faro ku tiris ah oo qabiilka adeegsada, si ay dalka mar walba gadaal dib ugu dhigaan.
Dowladdii madaxweyne Cabdi Qaasim, waxaa la degay oo ay ka shaqeyn weysay daneystataal hoggaamiye kooxeedyo ah oo uu ka mid ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, oo asna dowladdiisa si taas la mid ah ay ka socon weysay hogaamiyeyaal Islaami ah, oo dantooda gaarka ah dalka u burburiyey.
Hase yeeshee kuwa caddeystay dagaalka dowladda sida hogaamiye kooxeedyada iyo ururada Islaamiga ah, waxaa ka xun kuwa dowladda ku dhex jira, ee mar walba dantooda gaarka ah dowladda ay ka shaqeyn la’day, kuwaasi oo la degay dowladihii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Kooxdan oo aan u bixiyey magafeyaal, waa koox laba ah. Siyaasiyiin aan xildhibaano ahayn iyo xildhibaano ku dhex jira dowladda, inkasta oo ay u badan yihiin qeybta dambe.
Qasdwayaashan qaran dumiska ah, ayaa hadda mar kale isku dayaya inay dumiyaan dowladda iminka jirta ee hadda un dhameystay boqolkii maalmood ee ugu horeeyey.
Waa xaasidiin danta shacabka iyo dalka ka hormarinaya tooda gaarka ah. Sababta aan ugu bixiyey magafeyaal, waa shaqsiyaad aaminsan in mar walba ay xilal ka helaan dowladda, haddii ay ka waayaanna dowladda oo dhan rida, ayaga oo ku kicinaya mooshin iyo buuq aan dhammaan, taasi oo ay uga faa’iideystaan cadowga dibedda iyo kan gudaha.
Waxa ay si dadban u taageerayaan cadowga dibedda ee Soomaaliya iyo kan gudaha ee Al-Shabaab. Marka ay dowladda buuq iyo mooshin ay ku kiciyaan, waxay dowladda ka mashquuliyaan howshii ay gudan lahayd, waxayna taas beddelkeeda dowladda xoogga saartaa inay iska difaacdo magefayaasha.
Tani waxay fursad u siisaa Shabaabka inay isku abaabulaan oo ay hub urursi iyo diyaar garow dagaal galaan, qaraxyana dalka ka fuliyaan, sababta oo ah dowladdii weerarka ku qaadi lahayd, dhexdeeda ayaa is-haysata waqtina uma hayso inay Shabaabka kusoo jeesato.
Waxaa luma nidaamkii dalka oo idil, waxaana meesha ka baxa in dowladda dejiso siyaasado iyo qorshe dalka lagu hormarinayo, sida waxbarashada ubadka, waayo dowladdii waxay ku mashquushaa inay iska difaacdo kooxda dhexdeeeda ah ee dagaalka ku haysa.
Waxaa meesha ka baxa adeegyadii caafimaad, waxaana dowladdu ay awood u weysaa inay wax ka qabato arrimaha horseeda caafimaad darrada, sababta oo ah waxay ku mashquulsan tahay inay iska difaacdo magafeyaasha dagaalka ku hayo.
Ma rumeysan kartaa in Muqdisho ay ku yaalaan 14 ceel oo biyo wasaqeysan laga cabo, dadkuna ay ka qaadaan cuduro kala duwan. Dowladda hadda cusub, haddii durba dagaal lagu kiciyo, side arrimaha noocan oo kale ah wax uga qaban kartaaa.
Mar kasta oo xildhibaanada qaran-dumiska ay dowladda dagaal ku kiciyaaan, waxaa guuleysta Shabaab iyo cadowga Soomaaliya, waxaana mar walba laga adkaadaa shacabka Soomaaliyeed, oo dowladdii wax u qaban lahayd ay waqti iyo qarash ku bixiso inay iska difaacdo kuwa ku dhex jira ee cadowga u adeega.
Dowladda cusub ee hadda jirta waxaa dagaal ku haya xildhibaano saddex koox ah oo saddex dan oo gaar ah u adeegaya. Koox waa kuwa u adeegaya Ethiopia waxaana aabe u ah Cabdirashiid Xiddig, oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka Ethiopia. Labada koox ee kale waa kooxo diimeedyo. Kooxda Damu-Jadiid oo ay ka mid yihiin xildhibaanada Mahad Salaad, Cabdiraxmaan Odawaa iyo Faarax Cabdulqaadir, iyo kooxda Aala-Sheekh oo ay ku jiraan Axmed Macallin Fiqi iyo Abshir Bukhaari.
Kooxahan qaran dumiska ah, waxa ay Soomaaliya oo idil dhaafsanayaan dantooda gaarka ah, iyo xilal shaqsiyeed oo ay helaan. Cadowga koowaad ee Soomaliya waa kuwan, waana kuwa ay u baahan yihiin in shacabka ay isk qabtaan, haddii Soomaaliya la rabo inay horumar gaarto.
W/Q: Suleymaan Faarax Cabdullaahi